Shina · Janoary, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Shina · Janoary, 2019
Tantara mikasika ny Shina tamin'ny Janoary, 2019
Shina: Fanaraha-maso ny aterineto taorian'ny fihetsiketsehana Xiamen
(Marihina fa tamin'ny volana Jolay 2007 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) ” Teo ambanin'ny fandrindrana vaovaon'ny tanàna, tsy maintsy mampiasa ny tena anaran'izy ireo rehefa mandefa hafatra amin'ny tranonkala maherin'ny 100.000 izay voasoratra ao Xiamen ireo mpisera aterineto.” Xiamen dia tanàndehibe any Atsimon'i Shina iray izay ahitana olom-pirenena mampiasa bilaogy, fifanakalozan-kevitra ary hafatra...
Shina: Voasivana ny Flickr ary naneho hevitra ny vondrom-piarahamonina Flickr
Nanolotra ny fanohanany ho an'ny vondrom-parahamonin'ny Flickr Shinoa ary nampiditra tovana "Ry Shinoa Ahoana No.." i Hamed Saber, ny mpandrafitra an-tseraseran'ny Access Flickr! ao amin'ny Firefox (jereo ny antsafa nifanaovany tamin'ny Global Voices) izay nandray anjara tamin'ny adihevitra mahaliana momba ny Rindrin'Afo Lehibe ao Shina.
Nakaton'ny China Telecom ny RSS FeedBurner
Mediam-bahoaka07 Janoary 2019
Notaterina fa tsy afaka miditra ao amin'ny FeedBurner intsony ireo olona mampiasa ny China Telecom. FeedBurner, izay efa novidian'ny Google Inc hatramin'ny volana jona 2007 no mpamatsy lehibe ny RSS, mampandeha ireo bilaogy an'arivony maro, podcast (fandraketam-peo) ary famoaham-baovao.
Enjehin'i Shina amin'ny anaran'ny Marxisma ireo elatra havia mahaleotena
Fanoherana04 Janoary 2019
Raha maro amin'ireo Marxista ireo no matoky ny tolon'ny mpiasa ho hery mpitarika mankany amin'ny fanovana ara-tsosialy sy politika, ireo ideôlôgy shinoa kosa mihevitra ireto tanora elatra havia izay miara-mijoro hitaky ny zon'ny mpiasa ireto ho mpanakorontana.
Namaloka ny sehatra ara-kolontsaina niroborobo tao Hong Kong ny fikatonana tamin'ny mpanoratra tantara foronina mpisinta-kevitra iray
Hong Kong (Shina)02 Janoary 2019
Hatramin'ny taompolo 1950s i Hong Kong no nanana fomba nireharehana tamin'ny zavakanto sy literatiora an-tsesitany. Toe-javatra maromaro nitranga tao ho ao no ahafahana mihevitra fa misy loza mitatao ambonin'ireo.